अदालतको फैसलामा सरकार केही गर्न सक्दैन : प्रधानमन्त्री – Tharuwan.com
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु खुसीको कुरा भएको बताएका छन्।
अकारण अदालतको फैसलाको विषयलाई लिएर घुर्क्याउने, धम्क्याउने काम राजपाले गरेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले राजपाका लागि गर्न सक्ने जति सबै काम गरेको बताए।
बुधबार नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने- समर्थन फिर्ता लिनु पर्ने कारण थिएन लिनुभयो त्यो खुसीको कुरा हो।
‘अकारण अदालतको फैसलाको विषयलाई लिएर घुर्क्याउने, धम्क्याउने? जो उचित होइन। सरकारले गर्ने जति काम गरेको छ। उहाँहरूसँग कुनै सम्झौता गरेर तोडिएको त होइन। सरकारको तर्फबाट सक्दो गरिएको हो,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘उपचार खर्च दिएन कि। जेलबाट छुटाइएन कि। बाँकी वक्यौता कहिले कहिलेका हुन् तिरिएन की! सपथ ग्रहण नगराएकालाई गराइएन की सबै त गरेको छ।’
राजपा नेताहरुलाई सुरक्षा र सम्मानसमेत दिएको प्रधानमन्त्रीले बताए। ‘उहाँहरुलाई सुरक्षा सम्मान दिइएन कि त्यो पनि गरेकै छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
अदालतले तथ्य र प्रमाणका आधारमा कानुन बमोजिम गरेकोले रेशम चौधरीका बारेमा सरकारले केही गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।